Referral Fekitori: Vhura uye Mhanya Yako Pako Referral Kushambadzira Chirongwa | Martech Zone
Referral Fekitori: Vhura uye Mhanya Yako Pako Referral Kushambadzira Chirongwa
Muvhuro, March 22, 2021 Muvhuro, March 22, 2021 Douglas Karr
Chero bhizinesi riine kushomeka kushambadzira uye kushambadzira mabhajeti anokuudza iwe kuti kuendesa ndiyo nzira yavo inobhadhara zvikuru yekuwana vatengi vatsva. Ini ndinoda kutumirwa nekuti mabhizinesi andakashanda anonzwisisa masimba angu uye anogona kuziva pamwe nevavanoshanda navo vanoda rubatsiro rwandinogona kupa. Pasina kutaura kuti munhu ari kureva ini atovimbwa naye uye kurudziro yavo inotakura tani yekurema. Hazvishamise kuti vatengi vanotaura vanotenga nekukurumidza, kushandisa zvakawanda, uye kutumira dzimwe shamwari:
92% yevatengi trust kutumirwa kubva kuvanhu vavanoziva.
Vanhu vari 4x ingangoita kutenga painotaurwa neshamwari.
Kutumira zvishwe zvinogona dzikisa mutengo wako pakutenga kusvika 34%
Iko kunetsekana, chokwadika, ndeye nzira yekutevera iwo anotumirwa kuburikidza nekushandurwa. Munyika yedu yepamhepo, kuendesa kunogona kutevedzwa uchishandisa yakasarudzika chinongedzo. Kuve nehurongwa hunogovanisa iwo maratidziro uye kuteedzera yega yeaya mareferenzi.
Referral Fekitori inzvimbo yekushambadzira yekushambadzira inopa iyo yako kambani ne-yekuzvishandira, yakapusa, uye yakakwana yekutumira mhinduro yekushambadzira:
Usatombo kunetseka nezve kusaina uye kuve nekugadzira uye kuvaka imwezve chikuva. Referral Fekitori inouya nemazana akafanogadzirwa, mafoni-akagadzirira kumhara mapeji akasarudzika kana kutevedzera iwo ekuendesa mapeji emhando dzakaratidzwa. Iwe unogona kugadzirisa zvese mifananidzo, marogo, kopi, uye mibairo pane yega yeaya ma templates.
Pane imwe yako kutumira kushambadzira mushandirapamwe yakavakwa, iwe unogona nemaoko kuwedzera vashandisi kuburikidza nedhibhodhi, kana kukurumidza vashandisi kuti vawane avo ekutumira zvinongedzo munzira dzakawanda:
Via yakasarudzika yakaparadzirwa maLinki kune mumwe anotumira
Via QR kodhi yemumwe mutarisiri
Via iyo yakadzamidzirwa yekuendesa chirongwa pane yako webhusaiti
Kuzivisa kwako mu Referral Fekitori inoita kuti iwe ugone kutarisisa neziso pakukura kwechirongwa chako chekutumira kuitira kuti ugare uchiziva kuti avo vanokutumira vepamusoro ndevapi. Iwe unokwanisa kuwana data rako kuburikidza nedashboard kana kuitumira iyo kuburikidza newebhu webhu - unogona zvakare kutumira dhata rako chero nguva sefaira reCSV.
Referral Fekitori parizvino inosangana ne Hubspot uye iri kuwedzera Salesforce, Intercom, Shopify, uye WooCommerce iine API iri kuuya nekukurumidza.
Edza Referral Fekitori Yemahara
Kuzivisa: Ndiri kushandisa chinongedzo chinongedzo chakavakwa na Referral Fekitori mukati meichi chinyorwa.
Tags: kutumira fekitorireji yekumhara pejikutumira chinongedzokutumira kushambadzirakutumira chikuvakutumira software
Yemagariro Webhu Suite: Iyo Yemagariro Media Management Platform Yakavakirwa yeiyo WordPress Vaparidzi
Ndeapi Meta Tsananguro? Nei Iwo Akakosheswa kuOrganic Kutsvaga Enjini Maitiro?